Manontany tena ianao raha tonga ny fotoana hampiasana ny fitaovana Apple? | Avy amin'ny mac aho
Manontany tena ianao raha tonga ny fotoana hampiasana ny fitaovana Apple?
Peter Rhodes | | Apple
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny fahavaratra sy fotoana malalaka ho an'ny mpampiasa maro dia tonga ny fanontaniana angano Moa ve aho manao ny dingana haingana amin'ny vokatra Apple? Mazava fa raha mametraka an'io fanontaniana io amin'ny mpampiasa iray izay nampiasa Windows sy PC nandritra ny androm-piainany izy, amin'ny voalohany dia lazao hoe TSIA.
Na izany aza, ny zavatra niainako manokana dia milaza amiko fa vitsy ireo izay rehefa avy nanandrana ny vokatra Apple dia nilaza fa tsy mahafeno ny zavatra antenain'izy ireo na hoe sarotra tanterahina kokoa noho ny marika hafa. Inona koa, "tia" ny fahatsoran'i Apple izy ireo ary, mazava ho azy, ny tsiro tsara anananao rehefa mamorona ny vokatrao, izay fantatsika rehetra fa tokony hananantsika amin'ilay mpamorona azy Jony Ive.
Andao hiverina ilay fanontaniana avy eo, Mitsambikina ve aho amin'ny vokatra paoma?. Ny zavatra voalohany tokony hoeritreretinao dia raha vonona hampiasa rafitra fiasa vaovao ianao. Ny rafitra fiasan'i Apple, ny OS X izay hantsoina tsy ho ela dia macOS, ny watchOS, ny iOS ary ny tvOS dia manana workflows izay tsy mitovy amin'ireo izay hitantsika amin'ny rafitra toa ny Windows na Android, na izany aza, ny fiankinan-doha amin'ny rafitra Apple exponential ary voafehinao haingana ny zavatra rehetra azonao atao amin'ny fitaovanao vaovao na Mac, iPhone, iPod, iPad, Apple TV na Apple Watch.
Amin'ity bilaogy ity dia miresaka momba ny Mac, Apple Watch ary Apple TV isika. Eny, amin'ny raharahan'ny Mac dia hahita rafitra mafy orina sy voasoratra tonga lafatra ianao izay mahatonga ny zavatra sarotra ho tsotra sy haingana. Ny haavon'ny antsipiriany momba ny fisehoana dia azo zahana ary ny fifandraisana amin'ny rafitra Apple sisa dia azo atao tanteraka.
Rehefa miresaka momba ny fifandraisana misy eo amin'ireo rafitra isika dia miresaka momba ilay hevitra napetrak'i Apple teo ambony latabatra taona vitsy lasa izay ary mihabe ny famaritana azy ary izany no manomboka amin'ny rafitra iray dia afaka manohy amin'ny iray hafa ianao. Noho izany, teraka ireo protokol toy ny Continuity na AirDrop. Mikasika ny rafitra Apple TV dia mila milaza isika fa niova vao haingana mba hanomezana lalana ny tvOS ankehitriny, rafitra vaovao manome ny Apple TV ny toerana sahaza azy ao amin'ny efitranonao ary miha matanjaka hatrany i Apple. Ary farany, ny watchOS dia rafitra iray hafa, amin'ity tranga ity ny Apple Watch izay manomboka mifangaro ihany koa, ohatra, miaraka amin'ny macOS ho avy amin'ny alàlan'ny famelana ny Mac hamoha ho azy.
Araka ny hitanao, ny zava-drehetra dia manintona ny zavatra ho hitanao eo amin'ny tontolo iainana Apple ary fantatro fa olona maro izay tamin'ny alàlan'ny iPhone no niafara tamin'ny fananana ny tontolo iainana, iPad, Mac, Apple TV ary Apple Watch. Betsaka no hiteny ... izany no tadiavin'i Apple! Orinasa inona no tsy mitady tombony? Apple dia mila tombontsoa nefa manangona vola ao amintsika manana ny fironana farany amin'ny vokatra ary ireo vokatra ireo dia manana fampiasa tanteraka.
Tena mety ve ny vokatra Apple?
Tsia, fantatsika rehetra fa afaka mihatsara ny zava-drehetra ary mihombo ny fifaninanana, fa ho an'i Apple kosa aloha ny traikefan'ny mpampiasa ary mahazo aina amin'izay azony am-pelatanana ny mpampiasa fa tsy manana ny haitao farany takalon'ny fifandimbiasana traikefan'ny mpampiasa.
Raha te hianatra tontolo vaovao ianao ary afaka miteny hoe Apple eny na Apple tsia, tokony handray ny dingana ianao ary hanararaotra ireo volana fahavaratra ireo hahatratra raha manana vakansy hanaovana izany ianao. Manantena aho fa efa naharesy lahatra namana manokana iray, Ari Suárez, mba ho lasa anisan'ity fianakaviana lehibe ity, mpampiasa Mac, nanomboka ny fotoana iray ka hatramin'ny manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Manontany tena ianao raha tonga ny fotoana hampiasana ny fitaovana Apple?
Raul estrada dia hoy izy:
Nandritra ny androm-piainako dia nampiasa Windows aho, mandra-paha-andro nanapa-kevitra ny hanao ny dingana mankany Mac ary nanao izany tamin'ny macbook faharoa, araka ny voalaza, faingana ny làlan'ny fianarana ary tsy hanenenako mihitsy ny fiovana.
Valiny tamin'i Raul Estrada
Nandritra ny 24 taona teo ho eo dia mpampiasa PC aho, ary nanomboka tamin'ny iray amin'ireo rafitra fiasa Windows voalohany, nampiasaiko tamin'ny fomba rehetra ny dikan-teny rehetra, tamin'ny 2010 nanomboka nampiasa ny iPhone aho, tamin'ny 2013 niditra tao amin'ny iPad aho ary tamin'ny 2015 nifindra tany. MacBook Pro. Vokatr'izany dia tsy hanova ireo rafitra sy fitaovana Apple intsony aho, tena tia olona fotsiny. Miasa lavorary izy ireo ary mafy ny fanorenan'izy ireo ary tsy manan-tsahala amin'ny vokarin'ny mpanamboatra hafa.
Vao omaly aho no niditra voalohany tamin'ny fianakavian'i Mac ary raha toa ka somary ora vitsy tamiko ny zavatra niainana vaovao, dia nihoatra ny nandrasana fotsiny izany. Tamin'ny 2012 dia nanana ny iPhone aho ary tamin'ny 2013 iPad, heveriko fa lojika fa ny fitaovana manaraka dia ny Mac-ko ary faly aho.
Ahoana ny fomba hamohana ny Mac anao amin'ny macOS Sierra sy Apple Watch
Tim Cook sy Eddy Cue miaraka amin'ny Sun Valley Conference